အီဂျစ် အက်ဖ်အေနှင့် ဆာလက်တို့ အကြား တင်းမာမှု ပိုမိုပြင်းထန်လာ၊ မည်သည့် ကစားသမားမှ အထူးအခွင - Yangon Media Group
လီဗာပူးတိုက်စစ်မှူး ဆာလက်နှင့် အီဂျစ်အက်ဖ်အေတို့အကြား အပြန်အလှန် အငြင်းပွားမှုမှာ အဆိုးဆုံးအနေအထားသို့ ရောက်လာခဲ့ပြီး ကစားသမား၏တောင်းဆိုမှုများကို လိုက်လျောမည်မဟုတ်ဘဲ မည်သည့်ကစားသမားကိုမှ အထူးအခွင့်အရေး ပေးမည်မဟုတ်ကြောင်း အီဂျစ်အက်ဖ်အေ ကပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်း၏ပုံရိပ်အသုံးပြုသည့် မူပိုင်ခွင့်များကိုချိုးဖောက်ခဲ့သည့်အပြင် နိုင်ငံရေး အရအသုံးချခြင်းကို အီဂျစ်အက်ဖ်အေက ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ တောင်းဆိုမှုများပြုလုပ်ထားသော စာကိုပေးပို့ထားပြီး ဖြစ်သော်လည်း အကြောင်းမပြန်ခဲ့သည့်အတွက် မကျေနပ်ချက်များကို တွစ်တာတွင် ဆာလက်က ပြောကြားခဲ့သည်။ ဆာလက်၏အေးဂျင့်က အီဂျစ်အက်ဖ် အေထံပေးပို့ခဲ့သောစာအတွင်းမှ တောင်းဆိုချက်များကို The Sun သတင်းစာက ဖော်ပြခဲ့ရာတွင်အခွင့်မရှိဘဲ ဆာလက်၏ပုံရိပ်ကို အက်ဖ်အေကအသုံးပြုခဲ့ပြီးနောက် ကစားသမားအနေဖြင့် အနာဂတ်တွင်အဖွဲ့ ချုပ်ကပြုလုပ်သော ပရိုမိုးရှင်းပွဲများ၊ အင်တာဗျူးများ၊ ပရိသတ်များနှင့်တွေ့ဆုံပွဲများ၊ စပွန်ဆာအခမ်းအနားများနှင့် တရားဝင်ခရီးများတွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်တော့မည် မဟုတ်ကြောင်းဆိုခဲ့သည်။
ထို့အပြင် နိုင်ငံတကာပွဲကစားချိန်များ၌ လေ့ကျင့်ရေးကွင်းနှင့် အနားယူရာဟိုတယ်များတွင် အမှတ်တရလက်မှတ်ရေး ထိုးရန်လာရောက်လေ့ရှိသော ပရိသတ်များရန်မှကာကွယ်ရန် သက်တော်စောင့်နှစ်ဦးထားရှိပေးရန်လည်း ဆာလက်၏အေးဂျင့် အဘားစ်ကတောင်းဆိုခဲ့သည်။ယခုကဲ့သို့ ဆာလက်နှင့် ၎င်း၏အေးဂျင့်တို့က မကျေနပ်ချက်များကို အသီးသီး ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက် အဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့်မည်သည့်ကစားသမားများ၏ အထူးအခွင့် အရေးပေးတောင်းဆိုမှုကို လိုက်လျောမည်မဟုတ်ဘဲ အသင်းထက်ပိုအရေးပါသော ကစားသမားမရှိကြောင်း တုံ့ပြန်ပြောခဲ့သည်။
အီဂျစ်အက်ဖ်အေ၏ကြေညာချက်ကို The Sun ကဖော်ပြခဲ့ရာတွင် ”နိုင်ငံကိုယ် စားပြုတဲ့ကစားသမားတိုင်းအပေါ်မှာ အက်ဖ် အေဘက်က တူညီတဲ့လေးစားမှုရှိထားပါတယ်။ ဘောလုံးဟာ အသင်းလိုက်ကစားနည်းဖြစ်ပြီး တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း ကြောင့် ရလဒ်ကောင်းရတာမဟုတ်လို့ အသင်းထက် ပိုအရေးပါတဲ့ကစားသမားဆိုတာမရှိပါဘူး။ ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲအောင်ခဲ့တာမှာလည်း တစ်သင်းလုံးရဲ့အားထုတ်မှု ကြောင့်ဖြစ်လို့ ဘယ်ကစားသမားမှ အထူးအခွင့်အရေးရမှာမဟုတ်ပါဘူး”ဟု ဖော်ပြ ပါရှိသည်။
ကြားဖြတ်မဲဆွယ်မှုကို NLD မှ စက်တင်ဘာ ၃ တွင် စတင်မည်
ဇာဂါလိုကို ဂုဏ်ပြုသည့် အနေဖြင့် ကျောနံပါတ် ၁၃ ကို အဲလ်ဗက်စ် ပြောင်းဝတ်မည်
နှစ်စဉ်အခွန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ပြည်သူများနစ်နာမှု၊ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုမရှိစေရန် စည်းကမ်းချက
မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ တည်ဆောက်နေသည့် တန်ဖိုးသင့်အိမ်ရာကို ပင်စင်စားဝန်ထမ်းများအား ဦးစ??
FDA ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီး အဓမ္မကျင့်လုယက်သတ်ဖြတ်မှုမှ တရားခံတက္ကစီယာဉ်မောင်းကို သေဒဏ်ချမှတ် ၊ အမိန
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် လိုအပ်သည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပြီး ရင်းနှီးမြှ??